မြတ်စွာဘုရားသည်မည်သည့်လူမျိုးဖြစ်နိုင်သလဲ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Buddhism » မြတ်စွာဘုရားသည်မည်သည့်လူမျိုးဖြစ်နိုင်သလဲ
- kyaw naynay
Posted by kyaw naynay on Sep 17, 2011 in Buddhism, Critic | 51 comments
မြတ်စွာဘုရားသည် သာကီဝင်အနွယ်မှန်း ဗုဒဘာသာတိုင်းသိပါလိမ့်မည်။ သာကီဝင်မျိုးနွယ်တွေသည် သူတစ်ပါးသွေးအရောမခံ မိမိတို့အမျိုးအချင်းချင်းလက်ထပ်ကြသည်။ တစ်ခြားတိုင်းပြည်မှ ဘုရင်သည် သာကီဝင်နွယ်တွေနှင့် သွေးသားတော်စပ်လိုသဖြင့် သာကီဝင်မင်းသမီးကိုတောင်းသည် မပေးလျှင်စစ်ခင်းမည်ဟုဆိုသည်။ တစ်ခြားတိုင်းပြည်ကအင်အားကကြီးမားပါသည်။ စစ်ခင်းမှာကလည်းကြောက်သဖြင့် ကျွန်မတစ်ယောက်ကို မင်းသမီးအဖြစ်ဆင်ယင်ပေးပြီး ဆက်သလိုက်သည်။ ကျွန်မသည်သားတော်တစ်ပါးဖွားမြင်လေသည်။ မင်းသားအရွယ်ရောက်သော် သာကီဝင်တို့ရဲ့တိုင်းပြည်ကို လက်ဆောင်ပဏ္ဍာများဖြင့် အလည်သွားလေသည်။ မင်းသားပြန်သွားသောအခါ သာကီဝင်တွေသည် ကျွန်မရဲ့သားထိုင်သွားတဲ့နေရာဟုဆိုကာ နွားနို့နှင့်ဆေးချသည်။ ထိုအချင်းအရာကို ပစ္စည်းမေ့ကျန်သဖြင့် ပြန်လာယူသောမင်းသာက မြင်သွားလေသည်။ မိမိတိုင်းပြည်ပြန်ရောက်သော် မိခင်ကိုလည်းမေး ငိုလည်းငို သာကီဝင်တွေကိုလည်း စိတ်နာမုန်းတီးပြီး အမျက်ထွက်ကာ စစ်ခင်းမည်ပြု၏။ မြတ်စွာဘုရားက စစ်မပြုဖို့သုံးကြိမ်တားပေမယ့်မရသော် ဥာဏ်ဖြင့်ဆင်ခြင်ကြည့်ရ ဘ၀တစ်ခုတုန်းက သာကီဝင်တွေက ငါးတွေကို ရေထဲမှာအဆိပ်ခတ်သတ်သော ၀ဋ်ကြွေးပေးဆပ်ရဖို့အချိန်တန်သဖြင့် ဘုရားလည်းမတားတော့ပေ။ မင်းသားလည်းသာကီဝင်နွယ်တွေကို ချေမှုန်းလေရာသာကီဝင်တွေအများအပြားသေကုန်ပြီး ထွက်ပြေးသူကထွက်ပြေးရာ မြန်မာပြည်နယ်ဘက်ကိုရောက်လာပြီး မြန်မာလူမျိုးအဖြစ်တည်ထောင်နေထိုင်သည်။ ထို့ကြောင့်မြတ်စွာဘုရားသည် မြန်မာလူမျိုးဖြစ်နိုင်သည်။ မြန်မာတွေသည်လည်း သာကီဝင်နွယ်တွေဖြစ်ပေသည်။ ဘုရားရုပိတုတွေက ဟိန္ဒူရုပ်တွေဆိုပြီးပြောချင်ပြောကြပါလိမ့်မည်။ ဒါသည် သူ့နိုင်ငံမှာသူ့ရုပ်ထုမှာပဲလေ။ ဂျန်ပန်မှာဆိုလည်း ဘုရားရုပိတုကို ဂျပန်ရုပ်ထုထားသည်။ ဘုရားကိုမည်သူမှမမြင်ဖူးဘူးလေ။ မှန်းဆကာကိုးကွယ်နေကြရတာဖြစ်ပါသည်။
ကျွန်ုသည် ဖတ်ဖူးသမျှနဲ့ လူကြီးမိဘတွေပြောပြတာပေါင်းစပ်ပြီး ရေးသားထားခြင်းဖြစ်သည်။ မေ့သွားသဖြင့် အမည်တွေအတိအကျမဖော်ပြနိုင်တာခွင့်လွှတ်ပါ။ အကြောင်းတရားကို စာဖတ်သူများသိမြင်လျှင် ကျေနပ်ပါသည်။
About kyaw naynay
naynay kyaw has written 1 post in this Website..
View all posts by kyaw naynay →
Kyaw Naynay ပြော တဲ့ စကားအရ တို့တတွေ ဟာ ဘုရားမျိုးလား ဘာ လား ဆို တာတော့နှစ်ပေါင်း ၂၅၀၀ ကျော် အလှမ်းဝေး လို့ တိတိပပ ဘယ် ပြော နိုင်မလဲ ကွယ်။
ပြော နိုင် တာ ကတော့ သမိုင်း မှာ တရုတ် ပြေး မင်း ဆို တာ တော့ ရှိ ခဲ့ ဖူး တယ်။
အဲ ဒီတုံး မင်း ကတော့ မနိုင် လို့ ပြေးတာ ကွဲ့။
အခု မင်း ကတော့ တရုတ် ရှိခိုး မင်းလို့ တို့ ပြည်သူ အများ သိထားပါတယ် ကွယ်။ဘာလို့ ရှိခိုးလဲ ဆို တာ တော့.. ။
ဘုရားရှင် ဟာ လူသားအားလုံးအတွက် အနှိုင်းမဲ့ပါ။ကျွန်တော် တို့ ရဲ့နှလုံးသွေးပါ။မဝေဖန်ရင်အကောင်းဆုံး လို့ ထင်ပါတယ်။
မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီး နဲ့ပတ်သက်ပြီးပြောဆိုတဲ့စကားတွေကို ကျမ်းပြုအကျော်အမော် ဆရာတော်ကြီးတွေနဲ့တိုင်ပင်ပြီးတော့မှ ပြောစေချင်ပါတယ် ။
မြတ်စွာဘုရား ရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီး ဟာ .. လူသားမျိုးနွယ် တစ်ဦး ဖြစ်ပါတယ် ခင်ဗျား .. !
ကိုဘီလူးပြောတဲ့အတိုင်း ဒယ်အိုးလည်းကြောက်ပါရဲ့ မီးပုံလည်း ကြောက်ပါရဲ့
ဒီဦးနှောက် ပိစိညှောက်တောက်လေနဲ့ ဝေဖန်ရေးအကြီးကြီးတွေမလုပ်ရဲလို့
ဟောဒီအပေါ်က ကိုဘီလူးကွန့်မန့်နဲ့ ရောပေါင်းလိုက်ပါကြောင်း………………..
လူ့ဘုံ ထဲက လူသား တစ်ဦးပါ ။
လူသားအများစုရဲ့ ကယ်တင်ရှင်ပေါ့ ။ကယ်တင်ရှင်ဆိုလို့ လမ်းကောင်း လမ်းမှန်ပဲ ပြပေးတာနော် ..
ပြတဲ့ လမ်းထဲက မိမိနဲ့ ကိုက်ညီမဲ့ လမ်းကိုပဲ ရွေး ကျင့်ရမှာ ..
ငယ်နံမယ်က သိဒ္ဓတ္ထ ၊
မျိုးနွယ်စုက ဂေါတမ ၊
ဗုဒ္ဓ ၊ မြတ်ဗုဒ္ဓ လို့ ခေါ်ကြတယ် .. အရိယသစ္စာ သိပြီး ၊ သဗ္ဗညုတ ဥာဏ်တော် ရပြီး ဘုရားဖြစ်မှ လူတွေ ခေါ်ကြတာပါ ။တချို့ကတော့ ဂေါတမ ပေါ့ ..
ကျွန်တော်တို့တွေက ကိုယ်ဘာ လူမျိုးလည်း၊ ဘယ်လို ဘာသာကို ကိုးကွယ်လည်း ဆိုတာ ကိုယ် ကိုတိုင်သိကြမှာပေါ့ ။ ကိုခံယူထားတဲ့ ဘာသားတရားပဲ. ကိုယ်ကမှ မယုံကြည်ရင် ဘယ်သူက ယုံကြည် မှာလဲ.ဒိီတော့.. . ကိုယ့်ခံယူချက်ပေါ်မှာ ယုံကြည်မှုတစ်ခုနဲ့သာ အနိူင်ပိုင်းလိုက်ပါ။
ဆရာကြီးဒေါက်တာသန်းထွန်းကတော့.. သာကီမျိုးနဲ့ မြန်မာ..အတင်းဆက်စပ်ထားတယ်လို့ရေးဖူးတယ်.။
နှစ် ၁၅၀၀ကျော်နောက်ကျပြီးမှ ..မြန်မာဘုရင်တွေက.. လူလေးစားအောင်…ဘုရင်တွေက ဘုရားနဲ့အမျိုးတော်တယ်ဆိုပြီး.. ကောက်ထွင်လိုက်တာတဲ့..။
ရွေတိဂုံတို့။ ကျိုက်ထီးရိုးတို့၊ ရွှေစက်တော်တို့ ဘုရားသမိုင်းတွေနဲ့.. သဘောတူတူပါပဲ..။
– ဆွေမျိုးတွေအသတ်ခံရတော့မှာမို့..တားတယ်.။ သာကီဝင်တွေမျိုးဖြုတ်မဲ့.. စစ်တပ်ကြီးချီလာတာကို.. အရိပ်မရှိတဲ့(အရွက်ကျဲတဲ့)သစ်ပင်အောက် ထိုင်နေရင်း တားခဲ့ဖူးတယ် မှတ်မိတယ်..
– မြစ်ရေလုတာနဲ့..ပါတ်သက်ပြီး… စစ်တပ်၂ခု..ထိပ်တိုက်ချမလိုဖြစ်တော့လည်း.. အလယ်ကိုဝင်.. တရားပြ..တားခဲ့ဖူးတယ်..။
– သူ့ကျောင်းဘေး.. တခြားဘာသာဝင်တွေ.. မြေလာဝယ်ဖို့လုပ်တာလည်း.. ဘုရင်ဆီသွားပြောပြီး..တားခိုင်းတယ်..။
– ဒါပေမဲ့.. အဇာတသတ်မင်းက.. သူ့အဖေကို ထောင်ချခြေထောက်ကိုခွဲ..ဆားသိပ် လုပ်ပြီး..သတ်နေတာကိုတော့.. သွားမတားဘူး..။ မသိချင်ယောင်ဆောင်နေတယ်..။
According to the most traditional biography,[which?] the Buddha’s father was King Śuddhodana, the leader of Shakya clan, whose capital was Kapilavastu, and who were later annexed by the growing Kingdom of Kosala during the Buddha’s lifetime; Gautama was the family name. His mother, Queen Maha Maya (Māyādevī) and Suddhodana’s wife, wasaKoliyan princess.
The primary sources for the life of Siddhārtha Gautama are inavariety of different and sometimes conflicting traditional biographies. These include the Buddhacarita, Lalitavistara Sūtra, Mahāvastu, and the Nidānakathā. Of these, the Buddhacarita is the earliest full biography, an epic poem written by the poet Aśvaghoṣa, and dating around the beginning of the 2nd century CE. The Lalitavistara Sūtra is the next oldest biography,aMahāyāna/Sarvāstivāda biography dating to the 3rd century CE. The Mahāvastu from the Mahāsāṃghika Lokottaravāda sect is another major biography, composed incrementally until perhaps the 4th century CE.
သူကြီးကို ရဲဆေးတင်ပေးတာနေမှာဗျ။ တကယ်တော့ ဘုရားက လူလည်မျုိးဗျ။ တမျိုးမထင်လေနဲ့ ဦး။ ဘုရားကသူ့ ပထမဝါကျွတ်ကျွတ်ချင်း ဘာပြောသလဲဆိုတော့ ရဟန်းတို့ ခရီးထွက်ကြတဲ့။ ဒါက လူလည်တမျိုးပေါ့ဗျာ ။ နောက်တမျုိးကတော့ သူ့တရားကိုလက်လွှတ်စပါယ် မယုံကြနဲ့လို့လဲ ပြောတယ်။ တရားဂုဏ်ခြောက်ချက်နဲ့ ညီမှ ငါ့တရားလို့လဲပြောတယ်။ သူက သူ့တ ရားကို မယုံ ယုံအောင်ပြောတတ်တဲ့နေရာမှာ နှစ်ယောက်မရှိဘူးဗျ။ ဒါလဲလူလည်တမျိုးပေါ့ဗျာ။ ဒါကြောင့် ဗုဒ္ဓဂေါတမဟာ လူလည်မျိုးလို့ ပြောလိုက်တာပါ။ ဟဲ…ဟဲ ။
lionking ပြောပုံအရဆို ဘုရားကပဲ သူတရားတွေကို လူတွေမယုံအောင်ဟောရမလိုဖြစ်နေပြီနော်။
ူlionking ရေ ခင်ဗျားရဲ.ကွန်မန်.ဟာ ဟာသဆိုရင်တောင်သိပ်ကြောက်စရာကောင်းတဲ.ဟာသ
ရိတ်သိမ်းရပေမပေါ့ thantmonzaw ရေ။ ကျွန်တော်လည်းဗုဒ္ဓဘာသာဝင်ပဲ နားလည်ပါတယ်။ ဘယ်လောက်အထိနားလည်သလဲဆိုရင် သိဒ္ဓတ္ထဆိုတဲ့ ဂေါတမဗုဒ္ဓဟာ လူကမွေးတဲ့ လူပဲဖြစ်တယ်။ ဒါကြောင့် လူတစ်ယောက်လို့မြင်ပြီး လူတစ်ယောက်လို့ သဘောထားပြီး ဂေါတမ ဘုရားကို ယှဉ်ပြီး သူနဲ့ကိုယ် ရယ်စရာအဖြစ်ပြောလိုက်တာပါ။ ဒါကိုသာ မြတ်စွာဘုရားကြားရင်း ရယ်မယ်ထင်ပါတယ်။ ဘုရားကိုပြောထားကြတယ်မဟုတ်လား ဇဝနဥာဏ် ရှင်သန်တယ်လို့ ပြော တော့ကျွန်တော်တို့က ရယ်စရာပြောတာကို ဘုရားသာရှိရင် လက်ခံပြီး ရယ်စရာတောင်မှ ပြန်ပြီးပြောလိမ့်ဦးမယ်။ ဘုရားရဲ့ရယ်သံကို ပိဋကတ်သုံးပုံမှာ သောသောညံ အောင်ကြားချင်လိုက်တာ။ ဒါပေမယ့် ဘုရားပုံကဘယ်လိုဖြစ်နေ သလဲဆိုရင် ယနေ့ခေတ် ကျောက်ရုပ်ကြီးတွေလို အသက်မဝင် တည်တည်ငြိမ်ငြိမ်ကြီးဆိုရင် စဉ်းစားကြည့်ရုံနဲ့တင်သိနိုင်ပါတယ်။ ဘုရားဟာ မြင့်မြတ်တဲ့သူ ထူးချွန်ထက်မြက်တဲ့သူ ကျွမ်းကျင် လိမ္မာပါးနပ်သူလို့ ကျကျနန ယုံကြည်ပါတယ်။
တားလို့ရတာတား တားသင့်တားအပ်တာ တားတယ်ပေါ့ဗျာ။ တားလို့မရတာ တားမဖြစ်နိုင်တာ မတားဘူးပေါ့၊ အဲဒါဘာဖြစ်သတုံး။ မဖြစ်နိုင်မှန်းသိပေမဲ့ တချို့ကိစ္စတွေမှာ ဘာလို့တားလဲဆိုတော့ မတားဘဲနေရင် ပုထုဇဉ်တွေ အပြစ်ပြောမိ အထင်မှားမိကြမှာစိုးလို့။ ဘုရားရှင်က သဂျီးရေးထားတဲ့ ကိစ္စတွေမှာ မတားဘဲနေကြည့်၊ ဒါမှမဟုတ်လည်း ဝင်တားကြည့်ပါလား၊ သဂျီးမှာ အခြားတဖက်ကနေ ပြောစရာ ရှိနေအုံးမှာပဲ။ သာသနာနဲ့ ဓမ္မတာကို ရောအောင်မလုပ်ပါနဲ့ ငရဲအကြီးကြီး…………..ကြီးလိမ့်မယ်။
သူကြီးပြောတာ မဟုတ်တာမပါဘူးလေ။ဒါ ပေါမေက္ခဒေါက်တာ သန်းထွန်းရေးခဲ့တာလေ။သူလို လူမျိုးမြန်မာပြည်မှာမပေါ်သေးဘူး။
Gautama was the family name.မြန်မာလိုဗုဒ္ဓ၀င်စာအုပ်တွေရှိပါတယ်။
လူဆိုတဲ့အမျိုးက ကိုယ့်ကိုယ်ကို အခြားသူတွေထက် သိပ်တော် သိပ်ထက် သိပ်သိနေတယ်လို့ အထင်ရောက်လာရင် အဲလိုပဲ မတန်မရာတွေ ရေးချင် ပြောချင် ဝေဖန်ချင်လာတတ်ပါတယ်။ အကိုးအကားတွေနဲ့တင်ပြလည်း အဲဒါတွေက ဘယ်လောက်အတိုင်းအတာထိ မှန်တယ်၊ မှားတယ်ဆိုတာ ဘယ်သူမှမပြောနိုင်ပါဘူး။ ကိုယ်ကိုယ်တိုင်မမြင်လိုက် မကြုံလိုက်ရတဲ့ မြတ်စွာဘုရားအကြောင်းကို ကိုယ်လိုရာဆွဲပြီး ရမ်းသမ်းဝေဖန်နေတာ စိတ်ဆိုးစရာကောင်းတယ်။ ဘုရားကို ဘယ်လိုလူမျိုးလဲလို့မေးနေမယ့်အစား ကိုယ်ကကော ဘာကောင်လဲ? ကိုယ့်ကိုယ်ကိုကော တစ်ကယ်အမှန်သိရဲ့လား။ ပြီးတော့ကိုယ့်ကိုကော အခြားသူတွေက ဘာကောင်လို့ သတ်မှတ်နေကြသလဲ?
peacemaker ရေ ဟုတ်ပါ.ဗျာ ကိုယ်.အကြောင်းကိုယ်သိအောင်လုပ်ရပေမပေါ.
ဘုရားရှင် ဟောကြားတော်မူခဲ့သော တရားများကတော့ နှစ်များ ကြာလာတာနဲ့ လူတွေသိရှိနိုင်မှုအားနည်းလာနိုင်သလို၊ ပိုထားတာ၊ လိုသွားတာလည်း ရှိနိုင်ပါတယ်။
ခုပြောခဲ့တဲ့ စစ်ပွဲတွေ၊အဇာတသတ်မင်း ကိတ်စ တွေမှာလည်း ဒီလိုပဲရှိနိုင်ပါတယ်၊
ပြီးတော့ဘုရားရှင် လက်ထက်တော်တုံး က မြန်မာပြည်၊ နိပေါ၊ ကုလားပြည်၊ တရုတ်ပြည်၊ အမေရိကန်ဆိုတာ မျိုးလည်း ရှိတယ် တော့မကြားမိပါ။ (ကျနော် မသိတာ လည်းဖြစ် ရင်ဖြစ်မှာပါ) ။ ဇမ္မူဒိတ် ကျွန်း ဆိုတာမျိုး ပဲ ရှိုပါတယ်။
သေချာတာတော့ ဗုဒ္ဓဘာသာ မှာ ကမကောင်းတာလုပ်ရင် မကောင်းတာဖြစ်မယ်၊ ကောင်းတာလုပ်ရင် ကောင်းကျိုးရမယ် ဆိုတာပါ။ အခြား ဘာသာမှာလို အပြစ် ဝန်ခံရင် ကိုယ်စားခံပေးတာတို့၊ အပြစ်လွတ်တာမျိုး၊ နွားကို ကိုယ်တိုင်သတ် ပြီး အရပ်ဝေရင် ကုသိုလ် ရတယ်ဆိုတာမျိုး တော့မရှိပါ။
မကောင်းတာလုပ်ရင် မကောင်းတာဖြစ်မယ်၊ ကောင်းတာလုပ်ရင် ကောင်းကျိုးရမယ် ဆိုတဲ့ သဘော တရား ကို တော့ ရုတ်ဝါဒီသမား တွေလည်း လက်ခံနိုင်မယ် ထင်ပါတယ်။ တချို့မကောင်းမှုတွေက ချက်ချင်း အကျိုးမပေး ပေမဲ့ တချို့ကတော့ ချက်ချင်းနီးပါး အကျိုးပေးပါတယ်၊ ဥပမာ- လူသတ်တဲ့ မကောင်းမှုကို ပြုရင် ဥပဒေ အရ ကြိုးပေးခံရရင် ခံရမယ်၊ ထောင်အကြာကြီးကျရင် ကျမယ်။
မိမိ ကိုးကွယ်တဲ့ ဘာသာကို ဟာသ သဘော လုပ်တာ၊ သက်ဆိုင်ရာ ဘာသာတရား ရဲ့ အထွတ်အမြတ် ထားရာ ဘုရား ကို တခြား လူဂ္ဂို္ဂုလ် တွေကိုဝေဖန် သလိုမျိုး လုပ်ရင် တော့ ဘယ်သူမှ ကြိုက်မည် မထင်ပါ။
သူကြီးရေ..လောကသုံးပါးမှာ အမြတ်ဆုံးဖြစ်တဲ့ ဗုဒ္ဓဘုရားရှင်ကို ဝေဖန်ဖို့ မိုးစက်တို့ ဥာဏ်မမှီပါဘူး..ဗုဒ္ဓဘာသာကတော့ ဘာသာတွေအားလုံးထဲမှာ အဝေဖန်ခံနိုင်တဲ့ဘာသာပါ..
သူကြီးဝေဖန်တာ မိလိန္ဒမင်းလောက်မဆိုးသေးပါဘူး ..သူကြီးကအနောက်တိုင်းက စာပေတွေကိုမှဖတ်ချင်တယ်ဆိုရင် Ven. Dr.Sri Dhammananda ရေးတဲ့ What Buddhists Believe ဆိုတဲ့စာအုပ်လေးကို ရှာဖတ်ကြည့်စေချင်ပါတယ်..ဒီမှာတော့ ဦးဆန်းလွင်(ရှင်အာဒိစ္စရံသီ) ဘာသာပြန်ထားတာရှိပါတယ်..
ဆရာတော်ရဲ့ ဘွဲ့တော်က Ven.Dr.K.Sri Dhammananda ပါ။
…………….ဆရာကြီးဒေါက်တာသန်းထွန်းကတော့.. သာကီမျိုးနဲ့ မြန်မာ..အတင်းဆက်စပ်ထားတယ်လို့ရေးဖူးတယ်.။
ရွေတိဂုံတို့။ ကျိုက်ထီးရိုးတို့၊ ရွှေစက်တော်တို့ ဘုရားသမိုင်းတွေနဲ့.. သဘောတူတူပါပဲ..။ ……………ဆိုတာကတော့မှန်နိုင်တဲ့ အဆိုလို.ထင်ပါတယ်။
ဒါပေမယ့် အောက်မှာထပ်ပြောထားတာတွေကတော့ မပြောသင့်တဲ့ စကားတွေလို.ထင်ပါတယ်။ မိကျောင်းမင်းရေကင်းပြ။ ထွန်ရှေ့နွားကျူး၊ ဘုန်းကြီးစာချ၊ ဖအေထက်သားတစ်လကြီးတယ်လို. ပြောချင်ပြေပါသကြီး ဗုဒ္ဒဘာသာဝင်တွေ အထွတ်အမြတ်ထားတဲ့ဘုရားရှင်ကိုတော့ မကြိုက်ရင် မကိုးကွယ်ပါနဲ့ ပုတ်ခတ်သလို အနက်ကောက်လို.ရတဲ့စကားတွေကိုတော့ မပြောစေချင်ပါဘူး။
မှန်တယ် ဂျဲသု ပြောတာ ထောက်ခံတယ်။ ဒါပေမဲ့ မြန်မာဆိုတာ တိုင်းပြည် သို့ တိုင်းရင်းသားတွေ အားလုံးကို စုပေါင်းပြီခေါ်တာမို့လား။ မြန်မာလူမျိုးထက် ဗမာလူမျိုးပဲရှိတယ်။ ဗမာဆို တာကလည်း ပုဂံခေတ်က စတာမို့လား ဗမာဆိုတာ ရှမ်း၊မွန်၊ကရင်၊ရခိုင်၊ တရုတ်၊ ကုလား အဲ့တာတွေက ပေါင်းမိပြီး ဖြစ်လာတာဆို။ ရှမ်းတို့ ရခိုင်တို့လို အရင်ကတည်းက သပ်သပ် ရှိတာ မဟုတ်ဘူးဆို။
kyaw naynayရေ ဘုရားဟာဘာလူမျိုးပဲဖြစ်ဖြစ်အရေးမကြီးပါဘူး၊ သူ.ရဲ.အဆုံးအမကိုလိုက်နာဘို.ကျင်.ကြံဘို.သာအရေးကြီးတယ်လို.ယူဆပါတယ်။ ဝိဋဋူပက သကျသာကီတွေကိုသတ်ခဲ.တဲ. အကြောင်းအတိအကျကိုလည်းဗုဒ္ဓ၀င်စာပေတော်တော်
များများမှာဖတ်ရှုနှိုင်ပါတယ် ။သေချာတာကတော. ဘုရားဟာမြန်မာလူမျိုးမဟုတ်ကြောင်းပါဗျာ။
DNA .. DNA
ဘာလုပ်ရမလဲ DNA ကို။ကျုပ်သိတာတော့ သုံးလောကထွတ်ထားမြတ်စွာဘုရားရှင်မှာ တုနှိုင်းစရာမရှိ။သူ့ ရဲ့အဆုံးအမကို နာခံဖို့အဓိကဘဲ။
Kai ခင်ဗျားပြောတာ မဟုတ်သေးဘူးထင်တယ်။ သေသေချာချာလေ့လာပါ။ စာဖတ်ပါ။ အဇာသတတ် မင်းရဲ့ အတိတ်ဘ၀က ဘာတွေလုပ်ခဲ့လဲဆိုတာ သေသေချာချာပြန်ပြီး လေ့လာလိုက်ဦးဟုတ်လား။ သမိုင်း ဆိုတာ History သမားတိုင်းသိတာမဟုတ်ဘူး။ စွယ်စုံကျမ်းတွေတောင် ချွင်းချက်ရှိသေးတာပဲဗျာ။ အဲ့တော့ စာနာနာဖတ်ပါ ညီလေး အိုကေ။
ဂျဲသု ပြောတာထောက်ခံပါတယ်။ Lion king စာကိုဆင်ဆင်ခြင်ခြင်ရေးပါ။ ဒေါက်တာဘွဲယူထားတိုင်း သူတို့ပြောတာ အမှန်လို့ မဆိုလိုနိုင်ပါဘူး။ မယုံကြည်ရင်နေပါ။ မစော်ကားကြပါနဲ့။ မြန်မာ။ ဗမာ အချင်းချင်းတောင် ဒီလောက်သွေးကွဲနေမယ်ဆိုရင်တော.—————————ဟူးးးး
ဘာလူမျိုးမှ ညာလူမျိုးမှ ဆိုတဲ့ လူမျိုးစွဲဆုပ်ကိုင်မှု၊
ဘယ်လူမျိူးက မြတ်တယ်၊ ဘယ်လူမျိုးက နိမ့်ကျတယ် ဆိုတဲ့ ခွဲခြားမှု စတာတွေဟာ ပြဿနာတွေ ကို ဖန်တီးတတ်ပြီး
လောဘ၊ ဒေါသ၊ မောဟ တို့ရဲ့ လုပ်ရပ်ဖြစ်ကြောင်း ဘုရားရှင်ရဲ့ သွန်သင်ပြမှု၊
အဆိုပါ လောဘ၊ ဒေါသ၊ မောဟ တို့ကို အဆုံးသတ်နိုင်မယ့် ဘုရားရှင်ရဲ့ လမ်းညွှန်ပြမှု အဆုံးအမတို့ကို သိနားလည်ဖို့ အဓိကပါ။
ကုလားတွေရဲ့ဘုရား ကို လဲ မှားတယ် မပြောဘူး။
ဂျူးတွေရဲ့ဘုရား ကို လဲ မှန်တယ် မပြောဘူး။
ဗမာတွေ ကိုးကွယ်တယ်လို့အသံကောင်းဟစ်နေတဲ့ ဗုဒ္ဓ ဘာသာဆိုတာကိုလဲ လွဲနေတယ်လို့မပြောဘူး။
ဒီမယ် Stephen hawking……
ခင်ဗျားရဲ့စာအုပ်တွေ ဆက်ဖတ်ချင်တယ်။
Oakar Bo က သူကြီးကိုစာနာနာဖတ်ပါညီလေးဆိုတော့ သူကတော်တော်ကြီးပြီနဲ့တူတယ်နော်
ဘာသာတရားတွေအားလုံးကိုလေ့လာ ပြီးရင် ကိုယ်ကြိုက်တဲ့အချက်ကိုဆွဲယူ ဒါပြီးရင်ကိုယ့်ဘာကို
မြန်မာ။ ဗမာ အချင်းချင်းတောင် ဒီလောက်သွေးကွဲနေမယ်ဆိုရင်တော.—————————ဟူးးးး
@Oakar Bo အပေါ်မှာရေးထားတဲ့ကွန်မန့်တွေကို ဖတ်ရတာ မြန်မာတွေသွေးကွဲနေတယ်ပေါ့ ???????
ရင်နှင့် မြန်မာစာကို မြန်မာတစ်ယောက်က မြန်မာလိုရေးထားတာကို သဘောမပေါက်ဘူးထင်တယ်။ သူကြီး တွေ သူသေးတွေကျုပ်မသိဘူး။ ကျုပ်က ၂၅-၇-၁၉၅၁ ဖွားတစ်ယောက်ပါ။ အသက်ဘယ်လောက်လဲဆိုတာတော့တွက်ကြည့်ဗျာ။ သြော်-ခင်ဗျား သင်္ချာ တော့တတ်မှာပါနော်။
သူများလိုလင့်ခ် လုပ်နိုင်တဲ့ အလေ့တော့မရှိပါဘူး။ ဒါပေမဲ့
(၁) ဂေါတမ ဟာလူသားစစ်ဆိုတာ ကိုငြင်းနိုင်တဲ့ အထောက်အထားမရှိသေးပါဘူး။
(၂) ဗုဒ္ဓကိုတန်ခိုးရှင် လို့အထောက်အထားပြုနိုင်ရအောင် သံသရာမှာဖြစ်ပျက်သမျှကိုအရှိကိုအရှိအတိုင်းသာ ၄၅၀ါလုံးဟောခဲ့ပြီး ဖန်ဆင်းတီထွင် လုပ်ပြခဲ့တဲ့ကိစ္စမှန်သမျှကို ပညတ်ခဲ့ရုံမက ရှုတ်ချခဲ့ပါတယ်။
(၃) ဒီအတွက်ကြောင့် သာကီဝင်မင်းမျိုးဆိုတာမှန်ပေမဲ့ မြန်မာနိုင်ငံလိုမိုင်ရာထောင်ချီတဲ့ဒေသကိုရောက်လာပြီး မျိုးစေ့ချခဲ့တဲ့ ဇာတ်လမ်းဟာ ဖြစ်နိုင်ဘို့ရာအလွန်ခဲရင်းပါတယ်။
အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့် “ဒို့မြန်မာသာကီမျိုးဟေ့” ဆိုတဲ့စကားက ရာဇာတို့ရဲ့ရာဇ၀င်ကိုချယ်မှုန်းခဲ့တဲ့ သမိုင်းဆရာတွေရဲ့ ခေတ်အဆက်ဆက် ပုံကြီးချဲ့ကားမှုသာလျင်ဖြစ်နိုင်ကြောင်းပါ။ (ကိုယ့်ကိုယ်ကို အထင်သေးဖို့အထင်ကြီးဖို့လို့မှတ်ချက်ပြုဖို့ထက် – ကိုယ့်ရဲ့identity ကိုနားလည်ကြဘို့လိုကြောင်းပါ။)
အမှန်ကိုပြောလို့နှိပ်ကွပ်မယ် ဆိုလဲ ခံဘို့အသင့်ပါခင်ျေား…။
သြ ….ဒေါသတွေ ..မောဟတွေ ….ငါတကောတွေ …
MZ မှာက သာမန်အယူအဆကိုပင် ခိုင်လုံသောအထောက်အထားနဲ့ တင်ပြ ငြင်းခုန်ကြတာကိုသဘောကျတာပါ။ ဘာသာတခုရဲ့အထွတ်အမြတ်ကိုဝေဖန်ရင်တော့ပိုပြည့်စုံဖို့လိုပါလိမ့်မယ်..ဘာသာတခုမှာငြိမ်းချမ်းမှုဟာ အခြေခံအုတ်မြစ်ပါ.. ဒါကိုသွေဖြည်နေတာရှိရင်ထောက်ပြဝေဖန်တာကောင်းပါတယ်. .ဝေဖန်ဆန်းစစ်ခံနိုင်မှလဲ ယုံကြည်ကြမှာပေါ့.
.ဒေါက်တာသန်းထွန်းဟာ သမိုင်းမှတ်တမ်းနဲ့ရှေးဟောင်းလေ့လာမှုမှာတော့ ပါရဂူမြောက်ကျွမ်းကျင်သူဖြစ်ပါလိမ့်မည်.. သူ့ကောက်ချက်ကလည်းကိုးကားစရာတော့ဖြစ်ကောင်းဖြစ်ပါလိမ့်မည်. သို့ပေမဲ့ ကောက်ချက်သာဖြစ်ပါသည်..
ထပ်မေ၇းတော့ဘူးလို့ပဲ..။ လုံလောက်တဲ့.. အနီကဒ်တွေရထားတာမို့လေ..။
ပြောရရင်.. ကျုပ်ရေးတာမှာ.. ပထမအချက်က.. သမိုင်းပညာရှင်စကားကိုးကားတယ်.။
ဒုတိယအချက်က.. ဗုဒ္ဓသားတော်တွေ.. နိုင်ငံရေးလုပ်နိုင်တာကို ထောက်ခံရေးတယ်.။
ဗုဒ္ဓဘုရားရှင်ကိုယ်တော်တိုင်… လူတွေအကျင့်စရိုက်နဲ့..အချိန်အခါကြည့်ပြီး.. တုန့်ပြန်လုပ်တတ်တာကို ပြချင်တဲ့ စေတနာနဲ့.. သိခဲ့ဖတ်ခဲ့တဲ့.. အချက်အလက်တွေကိုးကားရေးလိုက်တာပဲ..။
ဒီလိုရေးလို့.. ဗုဒ္ဓကို စော်ကားတယ်ထင်သွားကြတာကိုတော့..(အမှန်ပြောရရင်) မအံ့သြမိပါ..။
တကယ်တော့.. ကိုယ်ကိုးကွယ်တဲ့.. ဘာသာ.. သာသနာကို တည်ထောင်ခဲ့သူဘယ်လိုလူ.. ဘာတွေလုပ်ခဲ့တယ်..ဘာတွေပြောခဲ့တယ်.. ဘာတွေမပြောခဲ့ဘူး.. ဘာတွေကနောက်တိုးတွေ.. သိကောင်းတဲ့.. ဆွေးနွေးကောင်းတဲ့.. ဝေဖန်စိစစ်ကောင်းတဲ့.. အ၇ာတွေပါ..။
ဂေါတမဗုဒ္ဓရှိစဉ်က.. သူကိုယ်တိုင်လည်း.. တခြားအယူဝါဒတွေကို စိန်ခေါ်ပြီး တရားဆွေးနွေးတယ်.။
အဲဒီခေတ်အချိန်က.. သူ့အသက်ရန်ရှာသူလည်းရှိတယ်(ဒေ၀ဒတ်)..။ သူနဲ့ဗိုက်ရပါတယ်ဆိုပြိး.. တရားဟောစင်ပေါ်တက်စော်ကားသူလည်းရှိတယ်..(စိဉ္စမာနဉ္စ)။
သူ့သာသနာထဲမှာ.. လက်ယာရံရှင်သာရိပုတ္တရာကိုယ်တော်တိုင်လည်း.. သာမဏေငယ်လေးက.. သင်္ကန်းရုံတာ အ၀န်းမညီလို ပြောတာ ..လက်ခံပြီး ပြုပြင်ရင်း..လေးစားသမှုနဲ့ ပြန်မေးတယ်..။
ကိုယ်ကိုးကွယ်တဲ့..သာသနာထောင်သူကို မဝေဖန်ရတာနဲ့.. တ၇ားကို မဝေဖန်ရတာနဲ့..
နောက်ဆုံး.. အ၀ါရောင်ဝတ်ရုံကောက်ခြုံလိုက်ရင်တောင်.. အဲဒီသူကို.. မဝေဖန်မစိစစ်ရတာနဲ့..ငရဲကြီးမှာနဲ့…ဖြစ်လာတော့တာပဲ..။
အထပ်ထပ်စိစစ်ဝေဖန်တော့.. အမှန်တရားကို အနီးစပ်ဆုံးရှာနိုင်မှာဖြစ်ပြီး.. အမှန်တ၇ား-သစ္စာတရားဟာ.. ဒီသာသနာကို… လူသန်း၅၀..အဲဒီက.. ၆၀..၁၀၀.. ၁၀၀၀ စသဖြင့် ချဲ့ကား..သာသနာပြုနိုင်မှာပေါ့..။
ဒါက.. သစ္စာတ၇ား..၊ တ၇ားဓမ္မရဲ့..တန်ခိုးစွမ်းအင်ပဲ..။
သစ္စာကို.. ဘူးခံပိတ်ဆို့ထားကြရင်.. သစ္စာစူးကြလိမ့်မယ်..။
မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုယ်တိုင် ကဝေဖန်ဆန်းစစ်ပြီးမှလက်ခံကြပါပြောပြီးသားဆိုတော့ကာ မဝေဖန်ပါနဲ့ဆိုရင်တော့ပြောတဲ့လူ
ကလွန်ကောင်းလွန်နိုင်ပါတယ်..ဒါပေမဲ့ ဒီနေရာမှာ တော့ဝေဖန်မှုပုံစံကို ပြောချင်တာပါ….ဒီဘာသာကိုလုံးဝလက်မခံထားတဲ့ လူတယောက်ရဲ့ဝေဖန်မှုကြမ်းတမ်းတာကိုသဘာဝအားဖြင့်လက်ခံပေး လို့ရနိုင်ပေမဲ့..ဒါကိုလက်ခံကျင့်သုံးနေသူ က ပုတ်ခတ်သလိုပြောနေရင်တော့..လက်ခံပေးဖို့ခက်ခဲမှာ အမှန်ပါပဲ။…..
ဟုတ်တယ်ကို kai ရေ ပြောတော့မိုးလား ကဲလားနဲ့။ ကျားကျားမီးယပ် ဆိုတာ ဒီလိုဗုဒ္ဓဘာသာ ဝင်တွေကို ပြောတာနေမှာ ဘုရားကအကြိမ်ကြိမ် သူ့ကိုရော သူ့စကားတွေရောကို အထပ်ထပ် စီစစ်ဝေဖန်စစ်ဆေးပါလို့ ပြောနေတာကို သူတို့က ပြော မပြောချင်ပါဘူးဗျာ။ ဘာကတော်တော် ဘာကကဲကဲ ဆိုတာမျိုးပေါ့။
“သူကြီး ကို ထောက်ခံပါသည်”
Most of Myanmar cannot escape from footprint of Bullock.
( နွားခြေရာခွက်ထဲက မထွက်နိုင် )
Why we cannot criticize ( ဝေဖန်ဆန်းစစ် ) “Lord Buddha” ???
I believe, there is nothing on earth we cannot criticize ( ဝေဖန်ဆန်းစစ် ).
I am very intelligent person &
I will believe in one religion only after criticizing ( ဝေဖန်ဆန်းစစ် ) this religion.
A person who believes the religion without criticizing ( ဝေဖန်ဆန်းစစ် ) might beadull & stupid person.
“ကိုယ့်ကိုယ်ကို အခြားသူတွေထက် သိပ်တော် သိပ်ထက် သိပ်သိနေတယ်လို့ အထင်ရောက်လာရင်”
Yes, I believe, I am better than at least 75% of dull & stupid majority.
ှဒီလိုအကြောင်းအရာမျိုးကို ရေးထားတဲ့ ဟန်က ပေါ့ပျက်ပျက်နိုင်လှပါသည်။
ဒီ့ထက်ပို တိတိကျကျလေ့လာပြီး ဒီ့ထက်ပို လေးလေးစားစားရေးသင့်သည်ဟုထင်ပါသည်။
ကျွန်တော်ပြောချင်တာမျိုးကို ကိုကြောင်ကြီးနဲ့ ဂျဲသု ပြောကြတဲ့ထဲမှာပါပြီးသားမို့ ၀င်မပြောတော့ဘူးလို့ပဲ နေတာပါ။
ဒါပေမယ့် သူကြီး အမုန်းခံမန်းထားတာ အလကားဖြစ်စေချင်လို့ မဟုတ်လောက်ဘူး- ၀င်ဆွေးနွေးကြစေချင်လို့ လို့ ယူဆပြီး ပါလေရာငပိချက် လုပ်လိုက်ရပါကြောင်း …..။:)
မြတ်စွာဘုရားသည် မြန်မာလူမျိုးဖြစ်နိုင်သည် ဆိုတဲ့အဆိုကတော့ – သာကီဝင်မျိုးတွေ တိုင်းပြည်ပျက်ပြီး ထွက်ပြေးတဲ့အချိန်နဲ့ ပျူခေတ် ပုဂံခေတ် တို့ဟာ အချိန်ချင်းဝေးလွန်းလို့ မဖြစ်နိုင်ပါဘူးလို့ပဲယူဆပါတယ်။
“ဆရာကြီးဒေါက်တာသန်းထွန်းကတော့.. သာကီမျိုးနဲ့ မြန်မာ..အတင်းဆက်စပ်ထားတယ်လို့ရေးဖူးတယ်.။
နှစ် ၁၅၀၀ကျော်နောက်ကျပြီးမှ ..မြန်မာဘုရင်တွေက.. လူလေးစားအောင်…ဘုရင်တွေက ဘုရားနဲ့အမျိုးတော်တယ်ဆိုပြီး.. ကောက်ထွင်လိုက်တာတဲ့..။” – ဆိုတဲ့သူကြီးရဲ့ ကောက်ချက်ဟာ အလွန်သင့်မြတ်ပါတယ်။ ဆရာကြီးဒေါက်တာသန်းထွန်းရေးတာ မဖတ်ဘူးပေမယ့် ကျွန်တော်လဲ အဲဒီအတိုင်းပဲ ယူဆပါတယ်။ တော်တော်များများလဲ အဲဒါကို သဘောတူမှာပါ။
“ရွေတိဂုံတို့။ ကျိုက်ထီးရိုးတို့၊ ရွှေစက်တော်တို့ ဘုရားသမိုင်းတွေနဲ့.. သဘောတူတူပါပဲ..။”
ဒါကတော့ သူကြီးစေတနာဇောနဲ့ လောကြီးပြီး ထည့်ပြောမိပုံပါ။ ကျွန်တော်တယောက်ထဲရဲ့ သဘောအရတော့ ဒီနေရာမှာ သူကြီးနဲ့ သဘောတူပေမယ့် အဲဒါတွေက အင်မတန် အငြင်းထွက်စရာတွေမို့ သီးခြားပိုစ့်တွေနဲ့သာ ကျိုးကြောင်းပြပြောဆိုရင်း သပ်သပ် အဆဲခံသင့်တာပါ။ ၀က်ဝက်ကွဲအောင် ဆဲဆိုကြလိမ့်မယ်ဆိုတာလဲ မျှော်လင့်ပြီးမှ ပြောရမှာလို့ ထင်ပါတယ်။ အထူးသဖြင့် ရွှေတိဂုံပါ ပါမယ်ဆိုရင်ပေါ့။
အောက်ပိုင်းမှာပါတဲ့ အကြောင်းအရာတွေကိုတော့ ဒီလိုဝင်ဆွေးနွေးချင်ပါတယ်……။
– ဆွေမျိုးတွေအသတ်ခံရတော့မှာမို့..တားတာ – သာကီဝင်တွေမျိုးဖြုတ်မဲ့.. စစ်တပ်ကြီးချီလာတာကို.. အရိပ်မရှိတဲ့(အရွက်ကျဲတဲ့)သစ်ပင်အောက် ထိုင်နေရင်း တားခဲ့တာဟာ လောကတ္ထစရိယံ ဥာတတ္ထစရိယံ ဗုဒ္ဓဿစရိယံ ဆိုတဲ့အတိုင်း ဘုရားအလုပ်ကို လုပ်လို့ရသလောက်လုပ်တာပါ။ အဲဒါလုပ်လို့ အကျိုး ၂မျိုး ဖြစ်ပေါ်ပါတယ်။
ပထမ – ဘုရားလုပ်ပြီး ကိုယ့်အမျိုးတွေရဲ့ဘေးရန်ကိုတောင် မတားဘူးလားဆိုတဲ့ အမြင်မျိုးဖြစ်နိုင်သူတွေရဲ့ သဒ္ဒါပျက်မှာကို တားမြစ်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။
ဒုတိယ – ၀ိဋဋူပမင်း နောက်တကြိမ် ချီတက်ဖျက်ဆီးတဲ့အခါမှာတော့ သာကီဝင်တို့ရဲ့ ကံအကျိုးပေးကို မတားနိုင်လို့ မတားတော့ပေမယ့် အဲဒီ၂ကြိမ်ကြားမှာ သာကီဝင်တို့လုပ်နိုင်သမျှ ကုသိုလ်ပါရမီတို့ ရရှိစေပါတယ်။ သာကီဝင်တို့ဆိုတာ (ကျမ်းထဲကအတိုင်းဆိုရင်) ငါးပါးသီလမြဲပြီး၊ ဒါန သီလ ဘာဝနာတွေ အမြဲပွားစီးနေတာကြောင့် ၄င်းတို့အပေါ်ကျရောက်မယ့် ဘေးအန္တရယ်ကို တစ်ခဏပင်ဖြစ်စေ တားမြစ်နှောင့်နှေးစေရင်တောင်မှ များစွာအကျိုးရှိစေကြောင်း (အငြင်းသန်တဲ့ကျွန်တော့်ကို) ဆရာသမားတဦး ပြောဘူးပါတယ်။
“- မြစ်ရေလုတာနဲ့..ပါတ်သက်ပြီး… စစ်တပ်၂ခု..ထိပ်တိုက်ချမလိုဖြစ်တော့လည်း.. အလယ်ကိုဝင်.. တရားပြ..တားခဲ့ဖူးတယ်..။”
ဒီကိစ္စဟာလဲ အပေါ်ကပြောသလို လောကတ္ထစရိယံ ဥာတတ္ထစရိယံ ဗုဒ္ဓဿစရိယံ ဆိုတဲ့အတိုင်း ဘုရားအလုပ်ကို လုပ်လို့ရသလောက်လုပ်တာပါ။ ဒီတခုကတော့ တားလို့ရခဲ့ပါတယ်။ သတ္တ၀ါတွေ အကျိုးမဲ့ပျက်စီးဘွယ်ရှိတာကို တားမြစ်နိုင်တဲ့အပြင် အဲဒါအကြောင်းပြုလို့ တရားဟောရာမှာ လူနတ်များစွာ တရားရကြပါတယ်။
“- သူ့ကျောင်းဘေး.. တခြားဘာသာဝင်တွေ.. မြေလာဝယ်ဖို့လုပ်တာလည်း.. ဘုရင်ဆီသွားပြောပြီး..တားခိုင်းတယ်..။”
ဒီဟာကတော့ ကောသလမင်းကြီးဟာ ဘုရားကိုအလွန်ကြည်ညိုပြီး ဗုဒ္ဓဘာသာကို များစွာ အလေးပေးကိုးကွယ်သလို ကျန်တဲ့ဘာသာတွေကိုလဲ လွတ်လပ်စွာ ကိုးကွယ်ခွင့်ပြုထားတဲ့ကာလမှာ –
အကယ်၍ အခြားဘာသာဝင်တွေက ရှိနှင့်ပြီးဖြစ်တဲ့ ဗုဒ္ဓဘာသာကျောင်းနားလာပြီး အပြိုင်အဆိုင် ကိုယ့်သာသနာကိုယ်ဖြန့်နေရင် မည်သူမျှအကျိုးမရှိပဲ အငြင်းအခုံတွေသာဖြစ်ပြီး နှစ်ဦးနှစ်ဘက် အကျိုးမဲ့စရာသာဖြစ်မှာမို့ တမင်ပြဿနာလာရှာတဲ့ အခြားဘာသာတွေ(တိတ္ထိတွေ)ကို အခြားနေရာသွားစေပြီး ပြဿနာကိုငြိမ်းအောင်လုပ်တာပါ။ အဲဒါလဲ အောင်မြင်ပါတယ်။ သာသနာအတွက် များစွာအကျိုးရှိသွားပါတယ်။
“- ဒါပေမဲ့.. အဇာတသတ်မင်းက.. သူ့အဖေကို ထောင်ချခြေထောက်ကိုခွဲ..ဆားသိပ် လုပ်ပြီး..သတ်နေတာကိုတော့.. သွားမတားဘူး..။ မသိချင်ယောင်ဆောင်နေတယ်..။”
အဲဒါက ကံကြောင့်ဖြစ်တဲ့ ၀ိပါက်မို့ ဘုရားသော်မှလဲ တားလို့မရပါဘူး။ ဘုရားသော်မှလဲ တားအပ်တဲ့ကိစ္စမဟုတ်ပါဘူး။ ဒါကြောင့် မတားပါဘူး။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘုရားဟာ အခြားဘုရားများနဲ့ ဒီနေရာမှာကွာတာပါ။ ဘုရားဆိုပြီး အနန္တ တန်ခိုးတွေနဲ့ပြည့်စုံပြီး ကိုယ်လုပ်လိုရာ လုပ်လို့မရပါဘူး။ ဗုဒ္ဓ၀င်ကိုဖတ်ကြည့်ရင် သူမလုပ်နိုင်တာတွေပဲ များနေတာတွေ့ရပါတယ်။ သဘာဝကျတဲ့အချက်လို့ပဲမြင်ပါတယ်။
အပိုလေးထည့်ပြောရရင်တော့ သိမှတ်ဘူးသလောက်- ဗိမ္မိသာရမင်းကြီးက အဲဒီအချိန်မှာ သောတာပန်ပါ။ သံသရာဒုက္ခဆိုးကြီးကို ပိုင်းဖြတ်နိုင်ပြီးပြီမို့ အဲသလိုတစ်ခါသေတာလောက်တော့ မပြောပလောက်တော့ပါ။
အချုပ်ဆွေးနွေးရရင် ကျွန်တော့အမြင်တော့ သူကြီးရဲ့ထောက်ပြချက်တွေအရလဲပဲ – ဘုရားရှင်ဟာ ဘုရားလုပ်ရမယ့်အလုပ်ကိုလုပ်ပြီး ဘုရားမလုပ်ရမယ့်အလုပ်ကိုမလုပ်တာပဲမို့ ပိုလို့သာ ကြည်ညိုဘွယ်ဖြစ်ရပါကြောင်းဗျာ……..။။
Agree, parlayar 46,
“သူကြီးရဲ့ထောက်ပြချက်တွေအရလဲပဲ – ဘုရားရှင်ဟာ ဘုရားလုပ်ရမယ့်အလုပ်ကိုလုပ်ပြီး ဘုရားမလုပ်ရမယ့်အလုပ်ကိုမလုပ်တာပဲမို့ ပိုလို့သာ ကြည်ညိုဘွယ်ဖြစ်ရပါကြောင်းဗျာ”
Actually, I strongly believe in ” Lord Buddha ”
Only thing I cannot accept is the idea of
” You should not criticize ( ဝေဖန်ဆန်းစစ် ) “Lord Buddha” “
parlayar 46, ရဲ့ အမြင်၊ နှလုံးသွင်းပုံ ဟာ အလွန်ပဲ သင့်မြတ် မှန်ကန်လှပါတယ်။
ယောနိသောမနသိကာရ ရှိသူအတွက် မည်သို့သော အခြေအနေနှင့်တွေ့ကြုံသည်ဖြစ်စေ စိတ်အေးချမ်းမှု – ကြည်လင်မှု ကုသိုလ်တရားတို့သည် အစဉ် ပွားများကုန်၏။
ယောနိသောမနသိကာရ မရှိသူ အတွက်တော့ အထက်ပါအခြေအနေကို ပြောင်းပြန်ယူကြပါကုန်။
ခုချိန်ရှိမရှိတော့ မသိပါဘူး။ အရင်ပန်းဆိုးတန်း မှာအမျိုးသားပြတိုက်ရှိစဉ်က…မင်းတုံးမင်းတရားကြီးနတ်ရွာစံစဉ်က ပုရပိုဒ်စာစုလေးတခု….
“ရေမြေ့သခင်၊ ဆဒ္နန်ဆင်မင်းသခင်၊ ဆင်ဖြူများရှင်၊ လက်နက်စကြာင်္သခင်၊ ဘ၀ရှင်မင်းတရားကြီး၊ လူုပြည်ညီး၍၊ နတ်ပြည်စံဝင်သည်။”..ဆိုဘဲ..။